Telegram မှအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိရန်အသုံးပြုမည့် Mega ဗီဒီယိုလမ်းညွှန် Androidsis
သငျသညျထိုသူတို့ထဲကပါလျှင် WhatsApp မှ Telegram သို့ပြောင်းနေသောသုံးစွဲသူများ WhatsApp ၏အဆက်မပြတ်ကျဆင်းသွားသောအရာများသို့မဟုတ်သင်၏ Android terminal တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာစွန့်ခွာသွားပြီးအမှိုက်များအားလုံးမှအဘယ်ကြောင့်သွားသည်သို့မဟုတ် Telegram သည် WhatsApp ထက်အဆုံးမဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်၊ သင်ကိုကျွန်ုပ်ယူဆောင်လာစဉ်ကတည်းကသင်သည်ကောင်းသောနေရာတွင်ရှိနေသည်။ အကြီးစားဗီဒီယိုလမ်းညွှန် Telegram သင်၏ Telegram application မှသင်အများဆုံးရရှိမည့်အကြံဥာဏ်များ၊ လှည့်ကွက်များနှင့်သင်ခန်းစာများကိုစုစည်းထားပါသည်။
တူညီသောပို့စ်တွင်စုစည်းထားသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ သင်ရှာဖွေနေသည့်ထိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသင်လျင်မြန်စွာကြည့်ရှုနိုင်ပြီးသင့်ကိုယ်ပိုင် bot ကိုရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်မှုဖြင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုလည်းကောင်း၊ ခလုတ်များနှင့်အတူကြော့မက်ဆေ့ခ်ျများကိုမည်သို့ပို့ရမည်ကိုလည်းကောင်းကောင်းစွာမသိနိုင်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ထက်ပိုရန် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေ၊ ငါပြောတဲ့အတိုင်း၊ မင်းရဲ့ပထမဆုံး Telegram သုံးစွဲသူလမ်းညွှန်အဖြစ်စုစည်းပြီးအတူတူထားလိုက်တယ်.
အစအ ဦး မှစ။ ငါပြသပေးသောဒီလက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုငါထားခဲ့၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာတွင် Telegram ကိုထည့်သွင်းရန်မတူညီသောရွေးချယ်မှုများရှိသည်
ဆက်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအမြင့်ဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဗီဒီယိုတစ်ခုချန်ထားခဲ့ပြီး၊ လူတိုင်း Telegram cloud ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သည့်ကိရိယာများစွာတွင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းအပြင်၎င်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် Telegram ကကျွန်တော်တို့ကို Cloud မှာအကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးအမြင့်ဆုံးအလေးချိန် ၁.၅ Gb အထိမည်သည့်ဖိုင်ကိုမဆို upload လုပ်နိုင်ပါတယ်.
အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာဒီ Telegram Cloud ကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်၊ telegram cloud ကိုပိုကောင်းအောင်စနစ်တကျသင် upload လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်တွေလုပ်ဖို့လိုင်းတွေဖန်တီးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပြတယ်။
ဒီအခြေခံကျတဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာနှစ်ခုကိုချန်ထားခဲ့ပြီး၊ Telegram ကို WhatsApp နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုမှာလုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် bot စတင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်သည်။ တေးဂီတနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုကူးယူရန်စက်များ၊ ဘာသာပြန်ботများ၊ စာသားကိုမိန့်ခွန်းနှင့်မိန့်ခွန်းသို့ပို့သော bot များ၊ moderator bot များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် bot ဖန်တီးရန်ကူညီသည့် bot များပင်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်ဘာကိုလုပ်ရမှန်းမသိအောင်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအစေခံမည့်အလွန်များပြားသောစက်ရုပ်များမှအစက်အပြောက်များ။ ထိုအခါငါသင်အကြံပြုထားတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုများစီးရီးထားခဲ့ပါ Telegram အတွက်အကောင်းဆုံး bot.
ဒီဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်အကြံပြုတဲ့ Bots အချို့ဟာအထူးသဖြင့်ဗီဒီယိုအဟောင်းတွေမှာအသုံးမ ၀ င်တဲ့ bot တွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါတောင်းပန်ပါတယ်။
ထိုနောက်မှ Bots ၏ထောက်ခံချက်ကိုလိုက်နာရန်၊ Telegram မှာတိုက်ရိုက်အသုံးပြုရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စတစ်ကာများဖန်တီးရန်သင်ကြားပေးသောလက်တွေ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ သင်၏မိတ်ဆွေအားလုံးနှင့်မျှဝေပါ
အကယ်၍ သင်သည် Chollos de Androidsis channel၊ Applications channel သို့မဟုတ်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်မည်သည့် channel ကိုမဆိုဆက်သွယ်မှုများနှင့်တုံ့ပြန်နိုင်သည့်ခလုတ်များနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်ဆိုပါက၎င်းတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရန်နှင့်ပို့ရန်သူတို့ဖန်တီးရန်မခက်ခဲကြောင်းသိပါ။ သူတို့ကိုသင်စိတ်ဝင်စားသောမည်သည့် chat သို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်စုသို့မဟုတ်ချန်နယ်သို့ပင်။
Quicksilver သည်ယခုအချိန်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီဖြစ်သည် ၎င်းသည်၎င်းသည်အဖွဲ့လိုက်အဆင့်မြှင့်တင်သည့်အုပ်စုများအတွက်အကောင်းဆုံးအုပ်စုတစ်ခုသာမကခလုတ်တိုင်များဖန်တီးရန်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်အလွန်စိတ်ပျက်မိသည်။ ပြသနာတွေကိုဖြေရှင်းပြီး bot ကိုပြန်မြှောက်လိုက်ရင်ဗွီဒီယိုကိုလည်းချန်ထားပါတယ်။ စုံစမ်းမှုမဆိုအမျိုးအစားသို့မဟုတ် သင်ဤ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် bot အထောက်အပံ့အုပ်စုအားသင်သွားနိုင်သည့်စီမံကိန်းကိုကူညီပါ.
ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုကြောင့်ဆာဗာပေါ်ရှိ bot ကိုလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိသော Quicksilver မရှိခြင်းသည်ယနေ့အထိဖြစ်သည်။ Telegram တွင်ခလုတ်များကိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့်ဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ Ban Hammer Bot ကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်, Bot သည်အုပ်စုကြီးများကိုအလယ်အလတ်အဆင့်အသင့်အတင့်ဖြစ်စေရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင် moderation bot များရှိသည်ဆိုပါစို့။
ဤနောက်ဆုံး bot သည် Ban Hammer နှင့်ကျွန်ုပ်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကြီးမားသည့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများသို့မဟုတ်အုပ်စုများကို၎င်းအပြင်၊ အုပ်စုလိုက်ကြိုဆိုသည့်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုလည်းအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်ဟာတိကျတဲ့ bot တစ်ယောက်ကိုအုပ်စုတစ်ခုဆီကိုဒီကြိုဆိုပွဲတွေကိုဖန်တီးဖို့သာဖန်တီးချင်တယ်ဆိုလျှင်၊ အောက်ပါဗီဒီယိုတွင်သင်အသုံးပြုရန်အခြားရွေးချယ်စရာရှိသည်။
Telegram မှာလည်းကျွန်တော်တို့မှာစီးရီးတွေရှိတယ် ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးဝက်ဘ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်ထုတ်လွှင့်သောသတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့စီစဉ်နိုင်သည် channel ကို administrator အဖြစ် bot ထည့်လိုက်တာနဲ့ငါတို့နှစ်သက်တဲ့ channel များသို့:
IFTTT ဆိတ်ကွယ်ရာအဘို့အတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောသတင်းများကိုပေးပို့ပါ Telegram သို့၎င်းသည် Twitter မှ Telegram သို့ပို့ခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့် Facebook မှ Telegram သို့လည်းကောင်း Instagram မှ Telegram သို့လည်းကောင်းပို့ရန်လည်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒီပြီးအောင်ရန် Telegram မှအကျိုးအများဆုံးရရှိရန် Mega Telegram ဗီဒီယိုလမ်းညွှန်ငါနင့်ကိုထားခဲ့ပါ သင့်ကိုယ်ပိုင် bot ကိုတစ်ဆင့်ချင်းဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာပြပေးမယ့်ဗီဒီယို. အခြား bot တွေဟာများသောအားဖြင့်အခြားမည်သည့်လက်မှတ်ခြေရာခံချက်မှမထားဘဲခလုတ်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်လည်းကူညီလိမ့်မည်။
ဒီ Telegram ဗီဒီယိုလမ်းညွှန်မှာကျွန်တော်လပေါင်းများစွာဖန်တီးခဲ့သောအကြံဥာဏ်များ၊ လှည့်ကွက်များသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများနှင့်ပြည့်စုံပါသည်။ သို့မှသာသင် Telegram မှကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအရာအားလုံးကိုသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းသောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ထက်အများကြီးပိုသော application တစ်ခု.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Telegram မှအကျိုးအပြည့်အဝရရှိရန်အသုံးပြုရန် Mega ဗီဒီယိုလမ်းညွှန်
တစ်ကွက် Bon! ခရီး! နာမည်ကြီး manga မှအလွန်ပျော်စရာကောင်းသောပဟေpိဖြစ်သည်